Inona no tokony ho fantatrao momba ny raharaham-pitsarana sivily | Orinasa Mpampanoa lalàna
Ny raharaha ady amin'ny fitsarana sivily no tsy fitovian-kevitra eo amin'ny isam-batan'olona na vondrona. Na izany aza, ireo tsy fitovian-kevitra ireo dia azo vahana any amin'ny fitsarana fotsiny. Hisy ny andaniny roa amin'ny raharaha sivily - ny Claimant, izay mitondra ilay fitakiana; ary niaro olona, ​​niaro ny fangatahana.
Raha misy olona nanao heloka nefa tsy fasana izany raha oharina amin'ny famonoana olona, ​​fanolanana sy fanararaotana dia azo apetraka miaraka amin'ny raharaha sivily ihany izy. Raharaham-pitsarana sivily dia heloka izay nahatonga fahavoazana. Tsy maintsy tompon'antoka amin'ireto fahavoazana ireto ny meloka. Tsy ahitana ny heloka bevava ity karazana raharaha ity.
Misy karazana tranga marobe ao amin'ny Fitsarana sivily. Samy hafa ireo miankina amin'ny fangatahana sy fitarainana napetraka.
Ireo raharaha momba ny ady amin'ny ankapobeny sivily dia misy fiampangana vola amin'ny tsy fifanarahana momba ny olona mandratra, fifanarahana ary fahavoazana amin'ny fananana. Izany dia azo alaina avy amin'ny orinasa ihany koa. Tafiditra ao ny vola iray nindram-bola nefa tsy nandamina (vola miankina amin'ny firenena).
Kely amin'ny fangatahana kely
Ireo tranga ireo dia azo apetraky ny olona na orinasa manohitra olon-kafa na orinasa iray ho an'ny kaonty tsy voatanisa izay ambany noho ny raharaham-pitsarana ankapobeny. Tsy misy mpisolovava navela amin'ity karazana tranga ity.
Ireo tranga ireo dia toy ny fanohanana ny zaza, ny fitaizan-jaza, ny fananganan'anaka, ny fialana na ny fisaraham-panambadiana.
Raha ankizy no latsaky ny 18 taona no ho miakatra dia apetraka eo ambanin'ireo raharaha olitra izy ireo. Ny zaza 18 taona etsy ambany dia tsy omena lalàna momba ny heloka bevava ary tsy afaka gadraina.
Tranga mpanofa / mpampandoa trano
Mitranga izany rehefa miezaka ny handroaka ny tompon-trano iray ny tompon-trano iray na rehefa misy mpanofa iray tsy nihetsika dia mitady ny hamerenany ny kitapom-bolany. Ireo fifandirana ireo dia mila alamina ara-dalàna.
Amin'ny raharaham-pitsarana sivily, ny mpitsara na ny mpitsara dia manapa-kevitra miorina amin'ny porofo izay azo inoana kokoa. Ity fenitra ity, izay antsoina hoe "Preponderance of the proof" dia manazava fa na firy na firy ireo porofoin'ireo antoko roa ireo, ny mpitsara ny mpitsara kosa dia mbola manapa-kevitra handinika izay tena azo inoana.
Raharaham-pitsarana sivily manasazy ireo meloka amin'ny sazy dikan-panjakana - sazy ara-bola. Izany dia mba hanonerana ny asa mafy sy fanimbazimbana amin'ny asa tsy mety. Tsy toa ny raharaha heloka bevava, ny raharaham-pitsarana sivily dia tsy mitondra fotoana am-ponja ary sazy ara-dalàna hafa. Amin'ny tranga hafa, ankoatry ny onitra sivily, ny mpitsara na fitsarana dia afaka manafoana ny fahazoan-dàlana na fahazoan-dàlana ireo meloka raha hita fa meloka.